Politikan’ny tsiambaratelo – Tsindrio eto raha hanomboka hanafohezana ny URL. .
Tsindrio eto raha hanomboka hanafohezana ny URL. .
Mpanafoanan URL miaraka amin'ny analytics, geo-Target, rohy fanarahana, API, fanafoanana ny rohy betsaka avy amin'ny rakitra iray, ary fisorohana hosoka amin'ireo programa afiliana
https://shortest.link Politikan’ny tsiambaratelo
Ity politika momba ny tsiambaratelo ity dia namboarina mba hanompo bebe kokoa ireo izay miahiahy ny amin’ny fomba fampiasana ny ‘Fampahalalana Manondro Manokana’ (PII) amin’ny Internet. PII, araka ny voafaritry ny lalàna momba ny tsiambaratelo amerikana sy ny fiarovana ny fampahalalana, dia fampahalalana azo ampiasaina samirery na miaraka amin’ny fampahalalana hafa hahafantarana, hifandraisana, na hitadiavana olona tokan-tena, na hamantarana olona iray ao anaty toe-javatra. Azafady mba vakio tsara ny politikanay momba ny tsiambaratelo mba hahazoana fahatakarana mazava amin’ny fomba fanangonana, fampiasàna, fiarovana, na fitantanana ny mombamomba anao manokana mifanaraka amin’ny tranokalanay.
Inona avy ireo mombamomba anay angoninay amin’ireo olona mitsidika ny bilaoginay, tranokalanay na fampiharana anay?
Rehefa manafatra na misoratra anarana amin’ny tranokalanay, raha ilaina dia mety angatahina ianao hiditra ny Long Url, Short Url, na antsipiriany hafa hanampy anao amin’ny zavatra niainanao.
Rahoviana isika no manangona vaovao?
Manangona vaovao avy aminao izahay rehefa mameno endrika na mampiditra fampahalalana amin’ny tranokalanay.
Ahoana no ampiasanay ny mombamomba anao?
Azontsika atao ny mampiasa ny fampahalalana angoninay avy aminao rehefa misoratra anarana ianao, mividy, misoratra anarana amin’ny alàlan’ny mailaka, mamaly ny fanadihadiana na fifandraisana amin’ny marketing, mivezivezy amin’ny tranokala, na mampiasa fampiasa amin’ny tranokala sasany amin’ireto fomba manaraka ireto:
• Hanatsara ny tranokalanay mba hanompoanao bebe kokoa.
Ahoana no hiarovantsika ny mombamomba anao?
Izahay dia tsy mampiasa scanning marefo sy / na scanning amin’ny fenitra PCI.
Manome lahatsoratra sy fampahalalana fotsiny izahay. Tsy mangataka nomerao amin’ny carte de crédit mihitsy izahay.
Mampiasa Scanning Malware mahazatra izahay.
Ny mombamomba anao dia voatahiry ao ambadiky ny tamba-jotra azo antoka ary olona voafetra ihany no afaka miditra amin’izany rafitra izany ary takiana hitandrina ny tsiambaratelo. Ho fanampin’izay, ny fampahalalana saro-pady / fampindramam-bola omenao dia voahidy amin’ny alàlan’ny teknolojia Secure Socket Layer (SSL).
Mampihatra fepetra fiarovana isan-karazany izahay rehefa miditra, mandefa, na mahazo ny mombamomba azy ireo ny mpampiasa mba hitazomana ny fiarovana ny mombamomba anao.
Ny fifanakalozana rehetra dia arotsaka amin’ny alàlan’ny mpamatsy vavahady ary tsy voatahiry na voahodina amin’ny mpizara anay.
Mampiasa ‘cookies’ ve isika?
Eny. Cookies dia rakitra kely izay ampitain’ny tranonkala na ny mpamatsy tolotra azy amin’ny kapila mafy ataon’ny solosainao amin’ny alàlan’ny tranokalanao (raha avelanao) izay ahafahan’ny rafi-tranonkala na ny mpanome serivisy hahafantatra ny fitetezana anao ary haka sy hahatadidy fampahalalana sasany. Ohatra, mampiasa cookies izahay mba hanampiana anay hitadidy sy hanodinana ireo zavatra ao anaty kalesinao. Nampiasaina koa izy ireo hanampiana anay hahafantatra ny safidinao mifototra amin’ny hetsika teo aloha na ankehitriny, izay ahafahanay manome serivisy nohatsarainao. Mampiasa cookies ihany koa izahay hanampiana anay amin’ny fanangonana angona angon-drakitra momba ny fifamoivoizana an-tranonkala sy ny fifandraisan’ny tranonkala mba hahafahanay manolotra traikefa sy fitaovana tsara kokoa amin’ny ho avy.
Mampiasa cookies izahay:
• Araho ny doka.
• Manambatra angona angon-drakitra momba ny fifamoivoizana an-tranonkala sy ny fifandraisan’ny tranonkala mba hanolorana traikefa sy fitaovana tsara kokoa amin’ny ho avy. Azontsika atao koa ny mampiasa serivisy antoko fahatelo atokisana izay manara-maso an’ity vaovao ity amin’ny anarantsika.
Azonao atao ny misafidy ny hampitandrina anao ny solosainao isaky ny andefasana cookie iray, na azonao atao ny misafidy ny hamono ny cookies rehetra. Ataonao amin’ny alàlan’ny fikirakiran’ny mpitety tranonkala anao izany. Satria hafa kely ny browser, dia jereo ny menio fanampiana an’ny browser raha te hahalala ny fomba marina hanovana ny cookies.
Raha vonoinao ny cookies, dia mety tsy hiasa tsara ny sasany amin’ireo fiasa izay mahatonga ny traikefa ananan’ny tranokalanao hahomby kokoa. Tsy hisy fiatraikany amin’ny zavatra niainan’ny mpampiasa izay mahatonga ny traikefa ananan’ny tranokalanao hahomby kokoa ary mety tsy hiasa tsara.
Fanambarana avy amin’ny antoko fahatelo
Izahay dia tsy mivarotra, mivarotra, na mamindra amin’ny antoko ivelany ny mombamomba anao manokana raha tsy manome fampandrenesana mialoha ho an’ny mpampiasa izahay. Tsy tafiditra ao anatin’izany ireo mpiara-miombon’antoka fampiantranoana tranonkala sy antoko hafa izay manampy anay amin’ny fikirakirana ny tranokalanay, ny fanaovana ny orinasanay, na ny fanompoana ireo mpampiasa anay, raha toa ka manaiky ny hitazona tsiambaratelo izany vaovao izany ireo antoko ireo. Azontsika atao koa ny mamoaka vaovao rehefa mety ny fanarahana ny fanajana ny lalàna, fampiharana ny politikan’ny tranokalanay, na fiarovana ny zonay na ny zon’ny hafa, ny fanananay na ny fiarovana azy.
Na izany aza, ny fampahalalana mpitsidika tsy fantatra manokana dia azo omena amin’ny antoko hafa amin’ny varotra, dokam-barotra, na fampiasana hafa.
Rohy avy amin’ny antoko fahatelo
Indraindray, araka ny fisainanay, dia azonay atao ny mampiditra na manolotra vokatra na serivisy an’ny antoko fahatelo ao amin’ny tranonkalantsika. Ireo tranokalan’ny antoko fahatelo ireo dia manana politika manokana sy tsy miankina. Izahay, noho izany, dia tsy manana andraikitra na tompon’andraikitra amin’ny atiny sy ny hetsika ataon’ireo tranonkala mifandray ireo. Na eo aza izany, mitady ny hiaro ny tsy fivadihan’ny tranonkalantsika izahay ary mandray izay hevitra momba ireo tranonkala ireo.
Ny fepetra takiana amin’ny dokam-barotra amin’ny Google dia azo fintinin’ny Fitsipika momba ny doka amin’ny Google. Napetraka mba hanomezana traikefa tsara ho an’ireo mpampiasa izy ireo. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en
Mampiasa ny Google AdSense Advertising amin’ny tranokalanay izahay.
Google, amin’ny maha mpivarotra antoko fahatelo azy, dia mampiasa cookies hanaterana doka amin’ny tranokalanay. Ny fampiasan’i Google ny cookie DART dia ahafahany manome doka ho an’ireo mpampiasa anay mifototra amin’ny fitsidihana taloha ny tranokalanay sy ireo tranonkala hafa amin’ny Internet. Ireo mpampiasa dia afaka misafidy ny fampiasana ny cookie DART amin’ny alàlan’ny fitsidihana ny politika momba ny tsiambaratelo Google Ads sy Content Network.
Nampiharinay izao manaraka izao:
• Remarketing miaraka amin’i Google AdSense
• Tatitra momba ny fahatsapana ny tambajotra Google Display
• Tatitra momba ny demografika sy ny tombontsoam-panontaniana
• fampidirana DoubleClick Platform
Izahay, miaraka amin’ireo mpivarotra ankolafy toa an’i Google dia mampiasa cookies an’ny antoko voalohany (toy ny cookies Google Analytics) ary cookies avy amin’ny antoko fahatelo (toy ny cookie DoubleClick) na mpamaritra antoko fahatelo hafa miaraka hanangonana angona momba ny fifandraisan’ny mpampiasa amin’ny doka ny fahatsapana sy ny asan’ny doka hafa raha mifandraika amin’ny tranokalanay.
Azon’ny mpampiasa atao ny mametraka ny safidiny amin’ny fomba dokam-barotra hataon’i Google aminao amin’ny alàlan’ny pejy Google Ads Settings. Raha tsy izany, afaka miala ianao amin’ny fitsidihana ny pejy Network Advertising Initiative Opt Out na amin’ny alàlan’ny fampiasana ny Google Analytics Opt Out Browser manampy.
Inona ny angona angonin’ny reCAPTCHA?
Voalohany indrindra ny algorithm reCAPTCHA dia hanamarina raha misy cookie Google amin’ny solosaina ampiasaina.
Aorian’izay, cookie cookie reCAPTCHA fanampiny fanampiny no ho ampidirina amin’ny tranokalan’ny mpampiasa ary ho voasambotra izy – pixel by pixel – sary iray feno an’ny fikandrana fitetezam-paritry ny mpampiasa tamin’izany fotoana izany.
Ny sasany amin’ny mombamomba sy ny mombamomba ny mpampiasa dia voaangona amin’izao fotoana izao:
Ny cookies rehetra napetrak’i Google tao anatin’ny 6 volana lasa,
Firy ny tsindry totozy nataonao teo amin’io efijery io (na mikasika raha eo amin’ny fitaovana mikasika),
Ny fampahalalana CSS ho an’io pejy io,
Ny daty marina,
Ny fiteny nametrahana ny mpitety tranonkala,
Izay plug-in napetraka ao anaty browser,
Fitsipika momba ny fiarovana ny fiainana manokana any California an-tserasera
CalOPPA no lalàna mifehy ny fanjakana voalohany eto amin’ny firenena mitaky tranokala ara-barotra sy serivisy an-tserasera hamoaka politika momba ny tsiambaratelo. Mihoatra lavitra an’i California ny tratry ny lalàna mba hitakiana olona na orinasa any Etazonia (ary azo eritreretina izao tontolo izao) izay miasa amin’ny tranokala manangona Fampahalalana azo fantarina avy amin’ny mpanjifa any California mba hametraka politika manokana momba ny tsiambaratelo hita ao amin’ny tranonkalany milaza ny tena angona nangonina sy ireo olona na orinasa anaovana azy. – Jereo bebe kokoa ao amin’ny http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
Manaiky ireto manaraka ireto izahay, araka ny filazan’ny CalOPPA:
Afaka mitsidika ny tranokalanay amin’ny fomba tsy fantatra anarana ny mpampiasa.
Vantany vao noforonina ity politika momba ny tsiambaratelo ity dia hanampy rohy mankamin’izany ao amin’ny pejin-tranonay izahay na farafaharatsiny farafaharatsiny, amin’ilay pejy manan-danja voalohany aorian’ny nidirantsika tao amin’ny tranonkalantsika.
Ny rohy Politikanay momba ny tsiambaratelo dia misy ny teny hoe ‘Tsiambaratelo’ ary mora hita eo amin’ny pejy voalaza etsy ambony.
Hampandrenesina anao ny fanovana ny politikanao manokana:
• Ao amin’ny pejy momba ny fiainantsika manokana
Afaka manova ny mombamomba anao:
• Amin’ny alàlan’ny mailaka anay
Ahoana ny fomba itondran’ny tranokalanay ireo signal tsy Track?
Izahay dia manome voninahitra ny signal tsy Do Track ary aza manara-maso, mamboly cookies, na mampiasa doka rehefa misy ny fanaovan-tserasera Do Not Track (DNT).
Mamela ny fanarahan-dia fitondran-tena avy amin’ny antoko fahatelo ve ny tranokalanay?
Zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa mamela ny fanarahana fitondran-tena avy amin’ny antoko fahatelo isika
COPPA (lalàna momba ny fiarovana ny fiainana manokana amin’ny zaza an-tserasera)
Raha mikasika ny fanangonana fampahalalana manokana avy amin’ny ankizy latsaky ny 13 taona dia mametraka ny ray aman-dreny amin’ny fibaikoana ny lalàna momba ny fiarovana an-tserasera ny ankizy (COPPA). Ny Vaomieran’ny varotra federaly, maso ivoho miaro ny mpanjifa any Etazonia, dia mampihatra ny COPPA Rule, izay manoritsoritra izay tokony hataon’ny mpandraharaha tranokala sy serivisy an-tserasera hiarovana ny fiainana manokana sy ny fiarovana an-tsain’ny ankizy an-tserasera
Tsy mivarotra ho an’ny ankizy latsaky ny 13 taona izahay.
Avelantsika hanangona PII amin’ny ankizy latsaky ny 13 taona ve ny antoko fahatelo, ao anatin’izany ny tamba-jotra na plug-in.
Fampiharana fampahalalana marina
Ny Fitsipiky ny Fampahalalam-baovao momba ny fampahalalam-baovao dia fototry ny lalàna momba ny fiainana manokana any Etazonia ary ny foto-kevitra ampidirin’izy ireo dia nitana andraikitra lehibe tamin’ny fampivoarana ireo lalàna momba ny fiarovana ny angona manerantany. Ny fahafantarana ireo fitsipika momba ny fampiharana fampahalalana sy ny fomba tokony hampiharana azy ireo dia manandanja mba hanarahana ireo lalàna momba ny tsiambaratelo miaro ny mombamomba anao.
Raha te-hifanaraka amin’ny fampiharana ara-pahalalana ara-pahalalana isika dia handray ity fepetra manaraka ity raha toa ka misy ny fandikana data:
Hampandrenesinay ireo mpampiasa amin’ny alàlan’ny fampandrenesana an-tranonkala
• Ao anatin’ny 7 andro fiasana
Manaiky ihany koa izahay momba ny Fitsipika momba ny fanarenana ny isam-batan’olona izay mitaky ny zon’ny tsirairay hitady ara-dalàna ny zon’ireo mpanangona angon-drakitra sy mpanodina izay tsy manaraka ny lalàna. Ity fitsipika ity dia mitaky tsy ny fananan’ny isam-batan’olona zon’olombelona ampiharina amin’ny mpampiasa angona, fa koa ny fananan’ny tsirairay manatona ny fitsarana na ny masoivohon’ny governemanta hanadihady sy / na hanenjika ny tsy fanarahan-dalàna ataon’ny mpikirakira angona.
Ny lalàna CAN-SPAM dia lalàna iray mamaritra ny lalàna momba ny mailaka ara-barotra, mametraka ny fepetra takiana amin’ny hafatra ara-barotra, manome ny zon’ireo mpihaino ny fisakanana ny mailaka tsy halefa any amin’izy ireo, ary manameloka sazy henjana noho ny fandikan-dalàna.
Manangona ny adiresy mailakao izahay mba:
Mba hifanaraka amin’ny CANSPAM, dia manaiky izao manaraka izao izahay:
• Aza mampiasa lohahevitra diso na mamitaka na adiresy mailaka.
• Fantaro ny hafatra ho toy ny doka amin’ny fomba mety.
• Ampidiro ny adiresy ara-batana amin’ny foiben’ny orinasanay na ny tranokalanay.
• Araho maso ny serivisy marketing mailaka an’ny antoko fahatelo amin’ny fanarahan-dalàna, raha ampiasaina izany.
• Manajà haingana ny fangatahana opt-out / unsubscribe.
• Avelao ny mpampiasa hisoratra anarana amin’ny alàlan’ny fampiasana ny rohy eo ambanin’ny mailaka tsirairay.
Raha te-hiala amin’ny fandraisana mailaka ho avy ianao amin’ny fotoana rehetra, dia azonao atao ny mandefa mailaka anay amin’ny
abuso@shortest.link ary hesorinay haingana ianao avy amin’ny taratasy rehetra.
Raha misy ny fanontaniana momba ity politika momba ny tsiambaratelo ity dia azonao atao ny mifandray aminay amin’ny alàlan’ny fampahalalana etsy ambany.
Namboarina farany tamin’ny 2021-01-11
Directory of shorteners URL
Marika rohy fohy amin'ny fitakiana mahafinaritra
Safidio ireo fiasa ilaina
Fanafohezana URL tsy misy fisoratana anarana
Fanafohezana URL marobe
Fanarahana ny rohy
URL fohy namboarina
Fisorohana hosoka amin'ny programa afiliana
Features: Fanarahana ny rohy
Fohy ny URL raha tsy misy doka
Mpanafoana URL marobe
Tsindrio eto raha hanomboka hanafohezana ny URL. . Proudly powered by WordPress